Madaxweyne Xasan Sheekh : "Hadii dadka reer Hiiraan tashan waayaan waa loo talinaa.."
Mogadishu Arbaco 3 October 2012 SMC
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad ka jeediyay magaalada B/weyne ee gobolka Hiiraan, isagoo shalay booqday magaalada Beled Weyne ee gobolka Hiiraan isla markaana ka hadlay xaaladda dalka iyo qorshaha dowladiisu damacsan tahay.
Isagoo si gaar ah ula hadlayay dadka degan gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in xaalado kala duwan oo dhibaatooyin ah ay soo mareen dadka dega gobolka Hiiraan, wuxuuna Madaxweynuhu sheegay in dowladiisa ay gacan ka geysaneyso sidii dadka gobolka degan ay usameysan lahaayeen maamul u gaar ah.
"Gobolka dadka degan way is ficli jireen, qolaba qolada kale ayay liidi jirtay, qolo hebel oo naga hub badan ayaa dhinaceena degan ayaa la dhihi jiray, laakiin hadda waxaan rabnaa inay arrintaasi dhammaato oo dadka gobolka ay ka shaqeeyaan midnimadooda" ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh oo sheegay inuu isagu ku dhashay gobolka Hiiraan.
Madaxweynaha ayaa sheegay in haddii dadka gobolka Hiiraan aanay sameysan maamul iyo kala dambeyn ay la gudboon tahay inay dowladdu u sameyso maamul oo ay yiraahdaan anaga Dowladda ayaan ka dambeynaa ee maamul ha noo sameyso sidaasna ay meesha uga baxdo is faquuqa iyo cunsuriyada ka taagan gobolka degmooyinkiisa.
"Dadka reer Hiiraanow ogaada qoomkii aan tashan waxay u adeegaan qoom kale" ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh oo ku boorinayay dadka reer Hiiraan inay isku tashadaan isla markaana u midoobaan sidii ay isku nabadgelin lahaayeen isla markaana wax u wadaqabsan lahaayeen.
Dhinaca kale khudbadda Madaxweyne Xasan Sheekh oo u muuqatay mid ka duwan khudbadihii uu horay u jeedinayay tan iyo markii Madaxweynenimada loo doortay, iyadoo la oran karo Madaxweyne Xasan Sheekh aqoon weyn ayuu u leeyahay gobolka Hiiraan bacdamaa uu isagu ku dhashay kuna soo barbaaray.